मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : कसको निर्देशनमा चल्दैछन् कंडेल ? – Newsrara
मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव : कसको निर्देशनमा चल्दैछन् कंडेल ?
न्यूज रारा October 11, 2020
काठमाडौं, २५ असोज। कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध नेकपाकै सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि त्यसको तरंग नेकपा र सिंगो संघीय सरकारमा पर्न थालेको छ। केन्द्रमा मन्त्रीपरिषद् पुर्नगठनमा सहमति जुट्न नसकिएरहेको बेला नेकपाको कर्णाली प्रदेशका नेकपा सांसदले आफ्नै पार्टीको सरकार विरुद्ध अविश्वास प्राप्त दर्ता गरेपछि नयाँ हलचल आएको छ।
७ प्रदेशमध्ये ६ प्रदेशमा नेकपाको सरकार छ र त्यसमध्ये कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमबाहेक अरुमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट नेताहरु मुख्यमन्त्री छन्। अधिकांश मन्त्रीहरु पनि उनी पक्षधर नै छन्। कर्णाली र सुदूर पश्चिममा भने प्रचण्ड पक्षधर मुख्य मन्त्री छन् भने अधिकांश मन्त्रीहरु पनि उनी र अर्का नेता माधव नेपाल पक्षधर छन्। त्यसको अर्थ कर्णाली र सुदूरपश्चिमको सरकारमा ओली पक्ष कमजोर रहेको छ।
नेकपाले सरकार चलाएका ६ वटा प्रदेशहरुमध्ये सबैभन्दा बढी विवादमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र वाग्मती प्रदेशका मुख्य मन्त्री डोरमणि पौडेल परिरहेका छन्। नेकपाभित्र यी दुवै मुख्यमन्त्रीलाई हटाइनुपर्ने आवाज निकै पहिलेदेखि उठिरहेको छ। तर, दुवै जना प्रधानमन्त्री ओली पक्षको भएकोले उनले हटाउन चाहिरहेका छैनन्। अहिले संघको साथै प्रदेश सरकारहरुको समेत मन्त्री मण्डल पुर्नगठन गर्ने कुरा उठ्दा मुख्यमन्त्रीहरु समेत फेरवदल गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको थियो। तर, त्यसबारे नेकपा कुनै टुंगोमा पुगिसकेको छैन।
केन्द्रमा दुई अध्यक्ष र सचिवालयमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन र प्रदेश सरकारका बारेमा छलफल चलिरहेका बेला एकाएक मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि नेकपामा फेरि आशंका चुलिएको छ। यसले नेकपामा विगतमा भएको सहमति समझदारी थियो कि युद्धविराम ? यो प्रश्न फेरि उब्जिएको छ।
पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मुख्यमन्त्री शाहीका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन मुख्य भूमिका खेलेका यामलाल कडेंल गौतम पक्षका सबैभन्दा प्रभावकारी नेता मानिन्छन्। मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदार रहेका कडेंल केन्द्रमा नेताहरुबीच सहमति भएर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाएदेखि नै असन्तुष्ट रहँदै आएका थिए र उनले पाए मुख्यमन्त्री खाने, नपाए प्रदेश मन्त्री नबन्ने घोषणा नै गरेका थिए। त्यसयता कर्णालीमा सरकार बनेदेखि निरन्तर रुपमा उनी सरकारको कडा आलोचना गर्दै आएका छन्। कर्णालीमा कानुनतः नेपाली कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि खास प्रतिपक्ष कडेंल नै मानिन्छन्।
‘यामलाल कडेंल ओलीका सबैभन्दा कडा आलोचक र वामदेव गौतमका सबैभन्दा नजिकका नेता हुन्। त्यसैले ओलीले भन्दैमा कडेंलले मान्दैनन्। यही कुरा बुझेर गौतममार्फत् प्रचण्डलाई दवाव दिन र थप वार्गेनिङ गर्न अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउन लागिएको स्पष्ट छ’ कर्णाली प्रदेशका एक नेताले भने। अविश्वास प्रस्ताव सभामुखको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्नेमा पार्टी संसदिय कार्यालयमा बुझाइनु पनि थप रहस्यपूर्ण मानिएको छ।
कंडेल प्रदेश सरकारप्रति असन्तुष्ट रहँदै आएको भए पनि उनको मात्र निर्णयले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको मान्न नसकिने ती नेताको तर्क छ। केन्द्रमा सरकार पुनर्गठनको चर्चा चलिरहेका बेला एकाएक कर्णालीका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आएपछि कंडेल कसको योजनामा परिचालित छन् ? भन्ने कुराको खोजी हुन थालेको छ। यसले नेकपाको राष्ट्रिय राजनीति र समीकरणमै फेरबदल ल्याउन सक्ने सम्भावना देखिएको छ।